Izinkinga ezi-10 ezijwayelekile ku-iPhone 6 no-6s nokuthi ungazixazulula kanjani | Izindaba ze-IPhone
UCarmen Rodriguez | | Izindaba ze-IPhone, iOS 8, iPhone 6, I-iPhone 6 Plus
Sonke siyazazi izinkinga ezinikezwa yi-iOS 8 entsha futhi silinde ukuvuselelwa njengamanzi kaMeyi, kepha kufanele sazi ukuthi lokhu ukuvuselelwa ngeke kulungise zonke izinkinga esingathola ngayo ekugcineni kwethu.
Uhlu lwa Izinkinga ze-iPhone 6 Ibanzi (ibuye isebenze kuma-iPhone 6s), kepha okuvame kakhulu yilezo esizozihlaziya futhi sizoveza indlela yokuzilungisa ngenkathi silinde isibuyekezo, lokhu noma okulandelayo, lapho ilungiswe ngqo.
Uma une iPhone 7, ungaphuthelwa yini amaphutha akho ajwayelekile nokuthi axazululwa kanjani
1 Ungazilungisa kanjani izinkinga zebhethri ze-iPhone 6
2 Ungazilungisa kanjani izinkinga zokuxhuma kwe-WiFi
3 Ungazixazulula kanjani izinkinga ze-iPhone 6 nge-Bluetooth
4 Ungayilungisa kanjani i-glitches ehlobene nohlelo lokusebenza
5 Ungakuthuthukisa kanjani ukusebenza
6 Ungayilungisa kanjani iJams ekubukekeni komhlaba nokubuka
7 Ungazixazulula kanjani izinkinga nge-iMessage
8 Ungakugwema kanjani ukuqala kabusha okungahleliwe
9 Ungayithuthukisa kanjani impendulo yekhibhodi sekwedlule isikhathi
10 Ungazivikela kanjani izinkinga zedatha yeselula
11 Izinkinga zesikhala: ungayikhulula kanjani inkumbulo
12 Izinkinga zomsindo
13 Uma kungekho okusebenzayo
Ungazilungisa kanjani izinkinga zebhethri ze-iPhone 6
Zonke izibuyekezo zinomthelela omubi empilweni yebhethri ye-terminal futhi i-iOS 8 ayikakuvimbeli. Kufanele sibe nombono ojwayelekile ngokwengeziwe wale nkinga futhi siqonde ukuthi ukusetshenziswa kwebhethri nakho kunqunywa ngephethini yokusetshenziswa ukuthi simnikeza, yingakho ngicabanga ukuthi i-Apple ayenzi akukho ngcono maqondana nalokhu kuzibuyekezo zesistimu ezizayo.
Kunezinto eziningi esingazincoma, kepha okuhle kakhulu lokho bheka Las izincomo esesizenzile kokuthunyelwe kwangaphambilini futhi khetha leyo evumelana kangcono nezidingo zakho nokuyisebenzisa.
Ungazilungisa kanjani izinkinga zokuxhuma kwe-WiFi
Eminyakeni emibili edlule, amabhodi ezingxoxo akwa-Apple abelokhu egcwele izikhalazo nge-WiFi, kusuka kumasiginali ancishisiwe kuya ekuxhumaneni okungazinzile. Lezi zikhalazo azikapheli nge-iOS 8. Yize singekho isixazululo esiqinisekisiwe kunezinto ezimbalwa okufanele uzame ngaphambi kokuthatha izinyathelo ezinqala.
Inketho yokuqala ukusetha kabusha izilungiselelo zenethiwekhi: Izilungiselelo > General > Setha kabusha > Setha kabusha izilungiselelo zenethiwekhi. Kuzofanele ufake kabusha iphasiwedi ukufinyelela i-WiFi.
Enye indlela yesibili ukucisha i-WiFi yohlelo. Okwakho: Izilungiselelo > Ubumfihlo > Indawo > Izinsiza zesistimu. Vala i- Ukuxhumeka kwenethiwekhi ye-WiFi y buyela emuva ifoni. Uma sekwephulwe kabusha kunethuba lokuthi i-WiFi isebenza ngokujwayelekile.
Uma izinkinga zakho nge de vumelanisa ne-iTunes, vakashela i- umhlahlandlela ukuxazulula le nkinga.
Ungazixazulula kanjani izinkinga ze-iPhone 6 nge-Bluetooth
Ngokumangazayo, lolu wudaba olunezikhalazo eziningi, ikakhulukazi kulabo abasebenzisa lo msebenzi ukuxhumana nehendsfri yemoto. Yebo kulungile asikho isisombululo esilingana nosayizi owodwa izimoto nezandla ezingenazandla, uma singathuthukisa ukuxhumana kwe-iOS 8.
Landela indlela: Izilungiselelo > General > Setha kabusha bese uqhubeka nalokhu Setha kabusha izilungiselelo. Zonke izilungiselelo ezilondoloziwe zizolahleka, kepha zibonakala zilungisa izingqinamba kubasebenzisi abaningi.
Ulwazi oluningi: Ungakuthola kanjani ukuxhumana kwe-bluetooth nemoto ngemuva kokubuyekeza ku-iOS 8.0.2
Ungayilungisa kanjani i-glitches ehlobene nohlelo lokusebenza
Izikhalazo nokukhathazeka kuzwakele nangezicelo ezikuhlelo olusha olusebenzayo iqhwa noma uvale nje. Ngokwami, uhlelo lokusebenza lweMeyili lwendabuko luyavalwa njalo lapho ngizama ukuphendula umlayezo. Ngakho-ke angimangali lapho izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni zikwenza.
Izinhlelo zokusebenza zomdabu zizohlupheka ukulungiswa nokulungiswa kwamaphutha, kepha labo bonjiniyela abavela eceleni bazoba umthwalo wonjiniyela ngamunye, I-Apple ngeke isize noma ingenelele futhi, kulokhu ngiyavumelana nenkampani.
Ngakho-ke, ukuphela kwento esele ukuyenza gcina izinhlelo zokusebenza zisesikhathini. Kwabavilaphayo, khumbula ukuthi unenketho yokwenza kusebenze izibuyekezo ezizenzakalelayo, ngoba lokhu kufanele ulandele umzila: Izilungiselelo > Isitolo se-iTunes nesitolo sohlelo lokusebenza futhi esigabeni se- Ukulandwa okuzenzakalelayoYebo, kufanele usebenzise inketho Ukuvuselelwa.
Ungakuthuthukisa kanjani ukusebenza
Ngenkathi ulwazi lwethu nge-iOS 8 ku-iPhone 6 lube luhle futhi lushesha, abanye bahlangabezane ne- a ukwehla okungahleliwe nokuhamba kancane ku-iPhone entsha. Noma lokhu kungeyona inkinga okwamanje, singaba nezinkinga zokusebenza emasontweni ambalwa ezayo.
I-iPhone ehamba kancane? Ukushintsha ibhethri kungayilungisa
Kunezindlela ezithile zokusheshisa ukusebenza kwe-iPhone 6 okungaba wusizo, empeleni ukunciphisa imiphumela kusuka ku-iOS 8, ezinye zikhona;
Susa umphumela we-parallax usebenzisa indlela: Izilungiselelo > General > Ukutholakala > Nciphisa ukunyakaza. Bona ukuthi ifakwa «Si»Ukususa umphumela, uma kungenjalo, hamba uchofoze inkinobho Nciphisa ukunyakaza ukuyiguqula ibe luhlaza.
Susa ukubonakala, uye ku: Izilungiselelo > General > Ukutholakala > Khulisa ukugqama > Yehlisa Ukubonakala bese wenza lo msebenzi usebenze.
Ungayilungisa kanjani iJams ekubukekeni komhlaba nokubuka
I-iPhone 6 ihlala kunamathele ekubukekeni komhlaba ngemuva kokushintshela mpo. Le yinkinga enkulu, ikakhulukazi uma usebenzisa uhlelo lokusebenza lwekhamera. Asikho isixazululo, kepha kukhona i-band-aid.
Lapho uzosebenzisa imodi yokubuka efanayo, ikhiya ukuma kwefoni kumenyu yesikhungo sokulawula.
Ungazixazulula kanjani izinkinga nge-iMessage
Ezinye izinkinga ukwehluleka ukuthumela imilayezo emisha, ukumaka emisha njengokufundiwe noma imilayezo efika sekudlule isikhathi. Kulezi zimo kunokunye ukulungiswa esingakuhlola.
Yenza kungasebenzi futhi wenze kusebenze iMessage (khumbula ukuthi inezindleko)
Qalisa kabusha ukuphela.
Setha kabusha i- ukumisa inethiwekhi yeselula: Izilungiselelo > General > Setha kabusha > Setha kabusha izilungiselelo zenethiwekhi. Ifoni izoqala kabusha futhi igcine amanethiwekhi e-WiFi elahlekile
Ungakugwema kanjani ukuqala kabusha okungahleliwe
Kwabanye abasebenzisi i Ukuqalisa kabusha okungahleliwe (ukuvuza kwenkumbulo) ku-iPhone 6. Leli phutha lenzeke ngaphambili ku-iPhone 5, 5s naku-iPad Mini, Air nakuRetina. Yize kungenzeki kaningi njengakuqala, kusenzeka kwabanye abasebenzisi.
Yize lungekho ikhambi laphakade, likhona izeluleko ezithile:
Qala kabusha I-iPhone 6.
Ukusetha kabusha okujwayelekile ngu: Izilungiselelo > General > Setha kabusha > Setha kabusha izilungiselelo.
Khipha izinhlelo zokusebenza zakamuva
Linda IOS 8.1.
Ungayithuthukisa kanjani impendulo yekhibhodi sekwedlule isikhathi
Ngezikhathi ezithile a Ukulahla okuncane kukhibhodi ye-iPhone 6 lapho uthayipha i-imeyili noma umyalezo. Alikho ikhambi elicacile lalokhu, kepha ungasetha kabusha wonke amasethingi: Izilungiselelo > General > Setha kabusha > Setha kabusha izilungiselelo.
Ungazivikela kanjani izinkinga zedatha yeselula
Ukuxhumeka okuhamba kancane, ukungabikho ngokuphelele koxhumano nezinye izinkinga ezifanayo futhi maqondana nokuxhumana no-opharetha kuyabikwa. Ukuzama ukulungisa lezi zinkinga;
Qalisa kabusha I-iPhone 6.
Nqamula idatha yeselula: Izilungiselelo > Idatha AmaSelula, cisha idatha yeselula nenketho ye-4G.
Yenza kusebenze i- imodi yendiza, linda imizuzwana engama-30 bese uyinqamula futhi ukuze kusebenze ukusesha amanethiwekhi weselula.
Izinkinga zesikhala: ungayikhulula kanjani inkumbulo
Ungasikhulula kanjani isikhala ku-iPhone yami
Uma iselula yakho ihleli ayikho inkumbulo yamahhala ukugcina izinhlelo eziningi, izithombe noma noma yini oyifunayo, ungaphuthelwa yilezi amathiphu wokukhulula isikhala ku-iPhone yakho.
Izinkinga zomsindo we-IPhone
Uma i-iPhone yakho ithule kakhulu noma ingezwanga ngqo, ungahle ube nenkinga ehlobene nesipikha sayo. Uma kunjalo, lapha sikukhombisa izizathu nezisombululo ezingaba khona zalezo Izinkinga zomsindo we-iPhone.
Uma kungekho okusebenzayo
Uma kungekho kulokhu okusebenzayo futhi ungasitholi isisombululo kuzinkundla ze-Apple, ngincoma izindlela ezimbili. Okokuqala, bamba i-iPhone bese uyisa kufayela le- Ibha yeGenius kusuka esitolo se-Apple. Kulabo abangakwazi noma abangafuni ukuya, kuzofanele bacabangele ukuqhuba u-rukusethwa kwemboni.
Yikuphi kulokhu Izinkinga ze-iPhone 6 uhlupheke? Ngabe kukhona okungekho ohlwini? Sitshele izimbungulu i-iPhone 6 noma 6s yakho ebinazo nokuthi uzixazulule kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 8 » Izinkinga ezi-10 ezivamile ku-iPhone 6 nokuthi ungaxazulula kanjani
Amazwana ayi-100, shiya okwakho
ngokuvamile ungayisebenzisi ifoni noma ususe konke okusha ku-ios 7
Omunye ube nenkinga ngefoni 6 plus camera, kweyami uthatha isithombe bese kuba namafu. Kwenzeka kimi kuphela ngekhamera yangaphambili ye-12mpx. Ngidinga usizo. NGENXA yokuthi i-ACA E-URUGUAY KUBONAKALA UKUTHI ANGINAWO INDAWO YOKUHLALA NGOKWALABO ABANGITSHELE NGENhlekelele
Yeka okuthunyelwe okucashile.
Setha kabusha yonke into, uma ingasebenzi ... asikho isixazululo.
Kungakapheli inyanga engu-1 uzophinde uyishicilele ngesinye isihloko.
Kwenzeka okufanayo kimi futhi kwaba ukuthi kwakudingeka ngihlanze indawo ye-lens .. pfff ngiyethemba ukuthi yilokho nje! unenhlanhla!
Carmen, sicela unake kakhudlwana lapho ubhala kokubili isipelingi nombhalo kanye nokuhambisana kwawo. Ngicaphuna amanye amaphutha abonakala ngeso lenyama "ukwazi" kuyaqaphela, "kufanele sibone umbono obanzi" Uzowubona kanjani umbono obanzi? Kunoma ikuphi, kungaba nombono obanzi, "yingakho-ke angikholwa ukuthi i-Apple izokwenza noma yikuphi ukuthuthuka" kungaba ukuthi angicabangi ukuthi i-Apple izokwenza noma yikuphi ukuthuthuka ngoba uma kungenzi lutho, kuzokwenza ngcono. Futhi ngakolunye uhlangothi, lokhu okuthunyelwe kuyaphindwa, kufana kakhulu nombhali ofanayo futhi akusizi ngalutho ngoba konke lokhu sekuvele kungaphezu kwalokho okushiwo, njengoba besho ngaphambili, buyisela futhi uma kungenjalo akusekho okunye.
Bafo, uma uqasha abahleli, ngicela uqaphele abakubhalayo futhi, okungenani, wazi futhi wazi ukubhala ngolimi lwabo lwebele.
UCarmen Rodriguez kusho
Lokhu okuthunyelwe ukuhlanganiswa (njengoba kukhonjisiwe yisihloko nomholi) nangokuqondene nesisho nohlelo lolimi, ngizokutshela kuphela ukuthi uphinde ufunde ukuphawula kwakho, okugcwele ukupelwa kabi kwamagama nezimpawu ezingekho ngaphambi kokugxeka abanye.
Uma ungenalutho ongazenza, zitholele umdlalo wokuzilibazisa kodwa uyeke ukukhuluma umbhedo, kanti, iSpanishi, yize silulimi lwami lwesibili, akusilo ulimi lwami, ngakho-ke usuqede ngokuphelele.
Phendula uCarmen Rodriguez
Kade ngaba ngumfundi waleli khasi, uCarmen uhlala egxekwa, kwesinye isikhathi enezizathu eziningi nakwezinye ezinokuncane, ngixolele ukukutshela uDamian, futhi ngenhlonipho efanele, lokhu kubheka okungenakwenzeka ... ushushuluze kakhulu kulokhu, yonke into yokufuna ukulandela «imfashini yokuthuka» ungazami ukuzenzisa, ngoba kukhombisa ukuthi awunawo umqondo wokukhuluma ...
UMarcelo pepe kusho
UCarmen omuhle! Laba yilabo abangenalutho abangalwenza nabalufundayo ukuze babone ukuthi yini okufanele bayigxeke…. Sanibonani, qhubekani kanjena, nisazise noma sihlanganisa, ngoba asikwazi ukufunda konke futhi kuvumelana nabaningi bethu.
Umlomo wakho ugcwele izizathu, Damien, uma unikeza iseluleko, hlala naso.
Ngendlela uDamian, AKUKHO "ukwazi"; "kuyazi", njengoba uCarmen abhale kahle. Kokunye konke, kahle, into efanayo noCarmen akutshela yona; Ngabe kwenzeke kuwe ukuthi ubuyekeze ukuphawula kwakho? Akukho nolulodwa uhlaka oselubekile (futhi kuneziningi ezingekho). Noma kunjalo, unganiki izifundo zesipelingi uma ungazi nokuthi ubhala kanjani kahle.
UDamien: unembeza nonembeza bavela ku-cum scio yesiLatin, ngesikhathi se-freíd igama elithi unembeza liyathandwa futhi yilona kuphela iqembu le-sc elihlulwa kulo.
Damien, lapha ufaka ukuveza izinkinga onazo ngama-iPhones, hhayi ukukhombisa ukuzidla komuntu oncomekayo, okungalungile endaweni.
hahaha, isithole esihle kakhulu ... ukusho izinto ezimbi kwabanye ngamaphutha nangaphezulu kwalokho, ukubeka amaphutha kuwe hahaha yini isilima
Iqiniso ngukuthi okubonakala kanjena uqinisile, ngicabanga ukuthi singama-masochists nathi esikholelwa ngokungaboni ukuthi konke kuzolungiswa, kepha hheyi, lezi zinkinga zenzeka ngisho nasemindenini ehamba phambili futhi, kulokhu, kubo bonke abenzi kuya kokukhulu noma kancane.
Ngijwayele i-iPhone futhi angishintshi yize nginezinkinga ezithile engizifingqa ngenhla….
Ngiyabonga ngokuphawula kwakho nangokukuhlonipha, ngokwethembeka kungumoya omncane ohlanzekile.
Sonke siyazi ukuthi izinhlobo zokuqala zenguqulo ngayinye ios ne-osx ziletha izimbungulu.
Ukuthi bayalungisa ngokuhamba kwesikhathi, esimweni se-ios uma kufanele ivuselelwe ngokuya ngokuphuma ku-osx hlala esitebeleni sokugcina kuze kube yilapho esisha sizinza ngokwengeziwe, ngikusho ngo-yosemite okuyilapho ifika khona.
Njengoba uCarmen esho ukuthi akukho lutho oluphelele noma akekho umuntu ophelele, bahlala benenketho yokuya kwenye ipulatifomu uma becabanga ukuthi benza kangcono.
Kuyahlekisa ukuthi konke okuqambe ngegama akwenzeki kimi ku-iphone 6 plus yami, ilungele mina
I-6 plus isebenza kahle kimi, kepha elinye iphuzu lokubuka lihlala lisiza futhi kuhlale kunokuthile okukuphunyukayo futhi ikakhulu uma ubandakanyeka kwezinye izinto ezingeyona ifoni, okuthunyelwe kuyaziswa futhi ezinye izindaba, okuqukethwe kanye nesendlalelo, nsuku zonke ngikuvakashela kaningi ukubona ukuthi ngabe ubeka yini okusha okuthunyelwe futhi yize ngibe ne-Apple iminyaka eminingi uhlala ungifundisa okuthile wena namakhasi wakho omngani ahlobene mac ne-ipad.
into eyiyo bekuwukubeka isihloko esithi "Izinkinga ezi-10 ezivamile ku-iOS 8"
Bona umsebenzi ngomakhalekhukhwini futhi kuvame ukuba nezinkinga eziningi kakhulu nge-iphone 6 no-6 plus manje ngokusobala enkolelweni yami abayethule ngaphandle kokuhlola umkhiqizo wabo kahle ngoba inamaphutha amaningi axazululwa kuphela ngokuqalisa kabusha, kepha ngangivame ukwenzeka futhi iqiniso ngeke silisebenzise ukukuqalisa kabusha
Ngine-iPhone 6 plus ne-iOS 8.1 ne-jailbreak futhi ihamba njengesibhamu, ngijabule kakhulu ngokuthengwa futhi kufanele ngisho ukuthi ngaphambi kokuba ngibe ne-iPhone 4 enejele futhi akukho mbala, ibhethri lihlala isikhathi eside , i-wifi ihamba ngokukhulu ukushesha futhi angisakutsheli ngemidlalo futhi akudingeki ngibe njengomShayina ogqolozele esikrinini, ingena kahle emaphaketheni ebhulukwe lami ngaphandle kokuthi ugqoke amabhulukwe aqinile akusona isitayela sami futhi ngihlale kuso kaningi ngesikhathi ngingena emotweni futhi ayizange igobe amamilimitha, okungukuthi uma ngiyivikele kahle ngekhava ye-ringke fusion nengilazi emnene esikrinini.
Daniel Moreno kusho
Ngithenge i-iphone 6 nezikhathi eziningi lapho ngisekhaya nge-wifi ... Akunankinga ... Kodwa uma ngihamba ekhaya ... kufanele ngivule futhi ngisebenzise idatha yeselula ye-3g noma i-4g ukuze isebenze kahle.
Lokhu kuyangihlukumeza…. Ngokunikwa inani leqembu
Phendula uDaniel Moreno
U-Arturo Glezca kusho
Lesi yisikhathi sesithathu ngibuyisa i-iPhone 6 yami (Yimi ngedwa). Ngiyithathile ukuqinisekisa enye i-3 ngifuna ushintsho noma ukubuyiselwa imali, kepha bayayibuyisela futhi bangitshela ukuthi isivele iyasebenza futhi abafuni ukuyiguqula. Ngenza kanjani lapho ??? I-Apple kufanele inake kakhulu, ngoba asichithi ku-200Dlls terminal ... Kubiza ngaphezu kwama-900Dlls, ngibuyela kwi-Galaxy S5 yami
Phendula u-Arturo Glezca
ntambama kahle umuntu angangisiza
Ngafaka i-iPhone 6 yami kuma-resets ngoba ngiyithengisile futhi yahlala esikrinini sasekhaya ne-apple logo futhi ayizange iqale kabusha noma yenze noma yini yahlala lapho…. ? Yini okufanele ngiyenze ukusetha kabusha?
Yebo, nginenkinga njalo uma ngithenga iringithoni, uyibeka njengethoni, noma kukhona konke umphathi, kuphela ukuthi ngemuva kwemizuzu embalwa ithoni isusiwe futhi lapho engibiza ithoni ezenzakalelayo iyaphuma kodwa ithoni ithi kukhokhiswa futhi angikutholi ekuthengeni okwenziwe noma okulandwayo,
Carmen, kungisize kakhulu, ngiyabonga.
Inkinga yami ukuthi ngenkathi isebenza ixhuma kwi-wifi yasehhovisi, kepha uma amahora ami okusebenza esephelile ayixhumeki kwi-inthanethi yohlelo lwe-iphone, angazi ukuthi ngiyixazulula kanjani
Sawubona, ukhona ongangisiza?. Ngiyilungisa kanjani inkinga enwetshiwe yesikrini futhi ngeke ingivumele ukuvula noma ukucisha i-iPhone 6 njengoba ingangivumeli ukuthi ngibone ikhibhodi. Ngiyabonga ubusuku obuhle. Ngendlela, ngivele ngazama ukukhipha ibhethri futhi ukuyishaja kabusha kusebenze isikrini eseluliwe futhi.
UCarmen Rodriguez (@carmenrferro) kusho
Sawubona Elias, zama ukwenza i-DFU ukuphoqa ukuqala kabusha zonke izinqubo, ngithemba ukuthi lokhu kuyakusiza, kungixazululele izinkinga eziningi.
Phendula ku-Carmen Rodriguez (@carmenrferro)
I-Angeles guidobono kusho
Sawubona ELias, ukwazile ukuxazulula inkinga? Kwenzeka into efanayo kimi nge-iphone 6s entsha. = /
I-iphone 6 plus yami ayixhumani ne-mac yami nge-bluetooth, ngithola isikhangiso sekhodi kuphela futhi ziyafana, ngiyasinikeza isixhumanisi, kodwa angazi ngenzenjani, umuntu angangisiza kule nkinga, ngiyabonga , Sanibonani
Kungani uma nginezithombe ezingama-895 lapho ngibheka i-albhamu "Zonke izithombe" ngithola i-1.975 lapho ngibheka Izithombe ku-Information Information?
azikhulumi lutho olusha
lokhu akusizi ngalutho
Muva nje anginayo inhlanhla enkulu nge-manzanita. I-iPad Air iyeke ukusebenza, bengingene esikhundleni sayo ESITOLO eWashington DC futhi angibange ngisaba nezinkinga, kepha ama-iPhone 5 engiwashintshe ngalo lolo suku ngemuva kwezinyanga ezintathu ayekile ukusebenza, lapho kuphela iwaranti yokushintsha. IMacBook Pro ngokungazelelwe yaba yikhadi lami, okuphambene nomoya olokhu uba ngcono futhi ungcono. Manje umndeni wonke une-iPhone 6Plus futhi akudluli izinsuku ezimbili lapho angidingi ukuphoqa ukuqala kabusha. Akuzona izinto ezishibhile zokuthi lokhu kwenzeke. Ngithande iMacBook esezophuma, kepha leyo ebizayo isivele ingasasebenzi futhi ayinayo ne-tunderbolt 2 adaptha (eyi-1 noma).
Kungakuhle uma isayithi liphendula lezi zinto ngoba labo esibhalayo bangabasebenzisi, hhayi ochwepheshe.
Ukuze ungisize ngidinga ukususa izinhlelo zokusebenza zefekthri i-
Umakhalekhukhwini iphone6 ​​wabe esengitshela ukuthi kufanele ngivuselele ️Ngiyenzile yafaka esikrinini 1 uhlelo lokusebenza lwewashi njengoba ngiyisusa i-axuliooooo !! Usizo oluphuthumayo !!
Basusa inkumbulo kumakhalekhukhwini ️ wami
Hhayi-ke, uma beyifundisile indlela obekungisiza ngayo ukuxhuma amamephu ngemoto engenazandla futhi lapho befaka le nguqulo entsha bayayisusa, kuhle uma beyifaka futhi
lulu perez kusho
Sawubona, ngiyaxolisa, nginenkinga enkulu, lapho umakhalekhukhwini wami uphahlazeka ucima futhi ungasavuleki, othile angangisiza ngengikwaziyo ukukwenza, ngaphezu kwalokho inketho ye-Wi-Fi nayo ivinjiwe futhi ngiyakwazi ' ngize ungene ukusula bese ubuyela ukuyokubeka .. siza ngicela!
Phendula ku-lulu perez
Ubusuku obuhle, ungayixazulula leyo nkinga? Benginayo efanayo kodwa bekufanele ngiyivule kugesi ocindezelwe nasekhaya ngasikhathi sinye
Ngine-iPhone engiyithenge ngoFebhuwari 2015 esitolo se-Apple ePanama. Namuhla, uMeyi 07, nekhokhiso ecishe igcwaliswe, ngokuzumayo yahlala ifile futhi ayizange ivule. Yini okufanele ngiyenze?
Ngine-IPhone 6 Plus engiyithenge ngoFebhuwari 2015 esitolo se-Apple ePanama. Namuhla uMeyi 07, nekhokhiso ecishe igcwele, yahlala yafa ngokungazelelwe futhi ayizange ivule. Yini okufanele ngiyenze?
UMarcela chediack kusho
Sanibonani nonke!! I-iphone 3s yesithathu ehlala ifile, kungakapheli izinyanga ezimbili !!!
Uma ngiphuma ngibaleka, nefoni yami yeselula ibhande lami lengalo, ibluetooth ivuliwe ... uma ngifika ekhaya iphelele. Ngokushesha iyacima, futhi ayisasebenzi. Ngivele ngishintshe owokuqala ngezinyanga ezimbili zokusetshenziswa, owesibili ngeviki kanti owesithathu ngezinsuku eziyisithupha zokusetshenziswa ... !!! Ngaphezu kwalokho, e-Argentina asikho isitolo esisemthethweni se-Apple, kufanele ngilinde umuntu ozohamba futhi angenzele umusa wokuyishintsha. Akusekho iphone kimi. owesithathu uyintelezi. Ushintsho lomkhiqizo.
Sawubona, ngine-iPhone 6 futhi ngithinta isikrini kubonakala sengathi yonke into yaba nkulu kakhulu futhi ayiphenduli noma ayiqale phansi .... Ingabe lizoba khona ikhambi?
Nginayo i-iPhone 6 kunezikhathi lapho icisha khona kuphela uma isenebhethri eligcwele ngifuna ukwazi ukuthi kungani izicima yodwa futhi kunezikhathi lapho ingasafuni ukuyivula
UPatty G. kusho
Ngiyabonga ngidinga ukwazi ngakho konke lokhu! Ungabalaleli ababucayi abafuna ukukucasula nje, uCarmen nginenkinga ku-iPhone6 ​​yami nge-I Message esikrinini sithola uhhafu ovundlile nohhafu ume mpo futhi angikwazi ukuwususa, ungangisiza noma umuntu owazi nge-iPhone 6 namazwana lapha. Ngiyabonga
Phendula uPatty G.
Lapho isikrini sikhulisiwe kungenxa yokuthi wenze kusebenze ukusondeza, kwenzeke kimi izikhathi ezimbalwa. Ngiyixhuma nekhompyutha eku-iTunes noma ngisebenzise i-Zoon ngaleyo ndlela
UJAVIER DUQUE kusho
NGABE UMUNTU ANGANGISIZA …… .. UMA NGISETHA KABUSHA IZILUNGISELELO ZAMI ZE-IPHONE 6 NGIQALA INQUBO YOKUBUYISELA NGABE NGILALISWA KUPHELA NGOMFANEKISO WAMA-MAC NEBHOLA NGOKUSETSHENZISWA KWE-10% SEKUFANELE KUHLANGANISWE IZINSUKU EZIMBILI, NOKUTHI KUSenjalo IBATTERY YAKHISHWA NGOKUPHELELE KANYE NOKUBA YISHAJALISWA, YAYIHLALA KULESI SIKHATHI ESIFANAYO (NGESIKHATHI SAMA-MAC NEBHOLA NGOKUSETSHENZISWA KWE-2%)
Phendula ku-JAVIER DUQUE
I-JAIRO CASADIEGOS LEAL kusho
Javier, ntambama, kwenzeke into efanayo kimi nge-iphone 6 yami, uthole yiphi impendulo. Ngiyabonga.
Phendula ku-JAIRO CASADIEGOS LEAL
Kwenzeka into efanayo kimi futhi angikwazi ukuyixazulula)) =
KWENZEKE KIMI OKUFANAYO, NGABE UKHONA UKWAZI UKUYISOLULA NAKUTHI? NGIYABONGA
UManuel Miguel kusho
aifon 6 itangada encane
Ngangine-aifon 5 futhi yayingifanele, ngathenga i-aifon 6 futhi engaphansi kwenyanga isivele inginikeza izinkinga zokumboza lapho ngifaka i-garrefur, abantu bashaya ucingo nge-mobiles ye-100 euros
Futhi ngine-euro engama-700 engingakwazi ukuyibiza ngocingo lwe-chestnut mobile futhi sithanda i-gelipollas ukusebenzisa imali, ubiza i-appel hhayi icala le-fucking ngakho-ke uyazifela futhi awusakwazi ukubiza i-garrefur, uthenge enye iselula engeyona aifon
UConstance Lillo kusho
Sawubona! .. i-myiphone ivula isikrini njalo ngemizuzwana emi-5 .. futhi lokho kwenza ukuthi ibhethri lihlale cishe lilonke ngosuku, kufanele ngiphathe ishaja yonke indawo ukuze ngingahlali uma likhokhisa: (ngubani owaziyo ukuthi kunesixazululo yini ?
Phendula uConstanza Lillo
sawubona ... ngafaka kabusha futhi ngicime i-iphone futhi ngisele nesithonjana se-apula
ngicela uphendule okungisizayo
UMariana demczuk kusho
UPedro Pablo kusho
Carmen othandekayo: Ngiyayithokozela imibono nezeluleko zakho maqondana ne-iPhone 6, yize ngingazange ngilethe noma yiziphi izinkinga ezibalulwe ngenhla, ngikuthatha njengomnikelo omkhulu osivumela ukuthi sabelane ngolwazi olubalulekile lokusebenza kahle kwemishini. Ngokubona kwami, ngokususelwe kokuhlangenwe nakho kwami, ngigculiseke kakhulu ngokwenziwa yidivayisi engikuthatha njengethuluzi lomsebenzi elihle futhi elisebenzisana ngokumangalisayo nazo zonke izinto zobuchwepheshe ezisizungezile. I-iPhone 6 naphezu kokubuyekezwa kwayo okungekuhle iyona smartphone ehamba phambili eyethulwe yi-Apple emakethe, isebenza kahle kakhulu futhi inosayizi ophelele uma kubhekwa ihadiwe kumadivayisi ane-Android angabe esasebenza ngokuphelele. Futhi ngiyabonga ngeqhaza lakho esithangamini nabantu abangakhi kakhulu, ngokwesibonelo uDamien. Kufanele bahlaziye isizinda sombhalo kunesimo. Yize uCarmen enamaphutha athile okubhala, okushiwo yile nkulumo akukaze kulahleke. Ngabe uDamien ucabanga ukuthi nakanjani lokhu kuhambisana kakhulu?
Phendula uPedro Pablo
Carmen othandekayo, noma amalungu esithangami; Ngathenga i-iPhone 6 ngesonto eledlule, futhi ngabona okuthile okungikhathaza kakhulu ngoba ngamanye amaselula ngangingenayo le nkinga; Ngixhuma kunethiwekhi ye-Wi-Fi, ngiyayisebenzisa kepha uma ngiyeka ukuyisebenzisa, iyanqamuka ngokuzenzakalela kuleyo nethiwekhi, ingishiya ngixhumeke kunethiwekhi yomhlinzeki wami wezingcingo, futhi ukuxhuma kabusha kufanele ngiye kuzilungiselelo zenethiwekhi futhi bese ngichofoza kunethiwekhi ye-Wi-Fi engiyilondolozile; iqiniso ukuthi kuyacasula impela ukwenza le nqubo njalo lapho ngizama ukusebenzisa noma yiluphi uhlelo lokusebenza oludinga ukuxhumeka.
Bengilokhu ngibheka izinketho ze-WiFi ukubona ukuthi kukhona yini engikubonayo okungajwayelekile, kepha angitholi lutho. Othile angaba nomusa kakhulu ukuphawula ngokuhlangenwe nakho kulokhu. Ngiyabonga.
Sawubona Damian. Uzamile ukusebenzisa ukubethela kwe-WPA? Ngiyakutshela: Ngiyazi amacala amaningi lapho kwenzeka into efanayo kithina futhi kwenzeke ngisho namadivayisi we-Android. Ezimweni engizaziyo, ngokubethela kwe-WPA, esingathi kunamandla kakhulu, bekungekho zinkinga zalolu hlobo. Ngikutshela lokhu ngoba angazi ukuthi yini engenzeka nge-iPhone yakho 6. Selokhu ngaqala ukubhala ngekhodi ku-WPA angibanga nankinga.
sawubona, ngine-iphone 6 ezinsukwini eziyi-3 ezedlule. Ngobusuku bokuqala engibufakele ukuthi ngikhokhise ngivuka ngakusasa futhi ifoni isifile. Ayivuli. ngeke isethwe kabusha. Futhi ishaja yebhethri noma ikhebula le-usb lekhompyutha alingitholi.
Kungaba yiphi inkinga? iphini yokushaja, ibhethri noma iseli life?
Sawubona, ngine-iPhone 6 futhi kusukela ekubuyekezweni kokugcina ngibe nenkinga. Ngisebenzisa idatha yeselula yohlelo lokusebenza (kulokhu i-YouTube) ngiphuma kumasethingi bese ngifaka kabusha futhi uhlelo lokusebenza alusebenzi ukusebenzisa nenethiwekhi yeselula. engingasebenzisa ngayo i-youtube nge-wifi kuphela.
Kwenzeka into efanayo kimi, nge-Facebook kuphela angikwazi ukusebenzisa idatha yeselula yalolo hlelo lokusebenza
Ngine-iPhone 4s futhi ngithole uhlelo lokusebenza oluthumela umculo we-Bluetooth emotweni yami ihendsfri, ngicabanga ukuthi kuwumqondo omuhle futhi ngiwuthola ulusizo ikakhulukazi kuma-audiobooks, ukuphela kwento engingathanda ukwazi ukuthi ikhona yini enye inketho .. Uhlelo lokusebenza lubizwa ngeBlue2car futhi angikwazi ukuthola imininingwane eminingi ngalo, ungangisiza?
uJairo ivan kusho
Ngingayiqala kanjani kabusha i-iPhone yami… .ngephethini yezokuphepha ikhiyiwe… .. inqobo nje uma ifoni ibingakhiyiwe. . . . . . nginike amathiphu, izinketho .xfa
Phendula ku-jairo ivan
Sawubona, ngine-Iphone 6 futhi ibambekile, angikwazi ukwenza lutho, nayo ngeke ingivumele ukuthi ngiyipake, ngenzenjani?
Sawubona lapho! ngine-phne 6 futhi nginenkinga yokuthola amanethiwekhi we-wifi. Angikutholi neze amanethiwekhi futhi engikuthola kuncane kakhulu. Yini engenzeka? Sengivele ngiqale phansi yonke into njengoba kuchaziwe ngenhla kepha inkinga efanayo iyaqhubeka, ngingasifuna isiqinisekiso? Ngingaphakathi kwe- to; noma ukuyithenga
Ungalokothi ukwenze ukuqala kabusha iselula. Ngoba ngokuhamba kwesikhathi ayisebenzi futhi kufanele uyithathe ukuyilungisa. Kulayishwa kabusha ukuqala kabusha noma ukubuyisela emuva bese kungalayishi okunye nokunye. UNGALOKOZI UKUBUYISELA NJENGOBA KUSHO KULOKU KULE NDLALO
I-Uia ngiyibuyisile nje ngoba bengingazi futhi manje lokho kwenzeka kimi, kuyahlolwa, inkinga ukuthi ngivela e-Argentina futhi lapha akukho App Store, ngicela umuntu owaziyo ukuthi angayixazulula kanjani.
ama-olga cubillos kusho
Sawubona, ngine-iPhone 6, ibisebenza kahle futhi ngokuzumayo yanamathela, ayingivumeli ukuthi ngishebule noma yini esikrinini noma ngiyicime ... ngenzenjani ukuze ngivule, ngiyabona ukuthi kuyinto ejwayelekile inkinga kulawa maselula, kepha angisifundi isixazululo,
Phendula ama-olga cubillos
Sawubona lapho ! Nginefoni-6 futhi ngifile, bekungenzekani? Uma othile engangisiza, ngiyabonga.
Namuhla ekuseni ngithenge isikhala samamegabhayithi angama-50 e-Icloud, bangikhokhise ku-akhawunti yami (ngasendleleni, kuphindwe kabili okwashicilelwa: € 1,98 ngenkathi abakunikelayo bekungama- € 0.99) kodwa futhi anginawo amandla ama-mega angama-50 kodwa lezi ezi-5 abazinikela mahhala. Ngabe kunesikhathi sokubambezeleka kusuka lapho usikhokha uze usinikezwe?
Sawubona nginenkinga nge-iPhone 6 ngiyahamba kancane futhi inkumbulo icishe ibe yi-vasia, umuntu angangisiza
Ngezikhathi ezithile, ikhamera yokushayeka komakhalekhukhwini we-IPhone 6, isikrini simnyama futhi akukho okusebenzayo, siyazilungisa ngemuva kwezinsuku ezimbalwa. Ngiyacela uma kukhona owaziyo okufanele akwenze ukwenza lokhu kwenzeke, ngazise. Ngiyabonga. Hector
Ngiyalungisa, ukuze kungenzeki
Sawubona, ngine-Iphone 6 Plus futhi kuvela insumansumane ethi… le thambo noma isesekeli asiqinisekisiwe, ngakho-ke kungenzeka singasebenzi kahle ngale Iphone ……. kepha kuvela ukuthi anginalutho oluxhumekile…. Nginenkinga yokuthi angikwazi ukulalela umculo, imiyalezo yezwi ye-Wapps noma yiluphi uhlobo lwemisindo, ucingo kuphela, engibona ngalo ukuthi isipikha siyasebenza…. kepha angazi ukuthi ngikuqalise kanjani okunye ... kwakuphelele
Sawubona, nginezinkinga nge-IPhone yami, ngemuva kokushayela imizuzu isikrini sihambe, hhayi ifoni, ngoba ukucindezela inkinobho yokujikeleza engezansi imizuzwana embalwa kusebenze ukusebenza kwezwi.
Banumzane, nicabanga ukuthi ngingayixazulula kanjani le nto?
Ngine-iPhone 6s futhi nginenkinga yokuthumela ama-imeyili .. Ngeke ingivumele .. Ngiyakwazi ukwamukela kepha angithumeli. Ngithola inketho ethi i-imeyili yami noma iphasiwedi ayilungile, kanti akunjalo. Ngingayixazulula kanjani? Ngizamile ukususa i-imeyili yami ngayibuyisela futhi asikho isixazululo
Rossy romero kusho
UCarmen: Ngiyethemba ungangisiza. Ngimusha kulokhu. IPhone ngine-6 ​​plus kodwa ayinayo i-3D application futhi ikhamera ayinaso isithombe esibukhoma noma i-flash yangaphambili. Angikwazi ukuthola noma iyiphi yalezi zinketho. Ngitshele kungani?
Sawubona ngibuyisele i-iPhone 6 s yami futhi isikrini savalwa kepha ifoni isavuliwe, ithola izingcingo futhi ngiyakwazi ukuphendula kepha uma ngiyixhuma kwi-pc ingicela ikhodi yenombolo noma ngaphezulu noma kancane thinta isikrini lapho izinombolo zikhona kepha akukho Ukuvula, yini engingayenza? Isikrini sicishiwe
Sawubona, i-iPhone 6 yami sekungokwesibili ukuthi iphelelwe yisithombe, lokhu kusho ukuthi uma izingcingo zingena kodwa angikwazi ukuphendula ngoba isikrini asivuli, angikwazi ukusicisha, njll. uma othile engangisiza ngingakuthokozela kakhulu
Sawubona, suku oluhle, ngine-iPhone 6 plus futhi njengoba ngiyibuyekeza, ithikhiwe, inamathela esikrinini se-aprtuna futhi kufanele ngiyilinde iqale, ingabe sikhona isixazululo
Marcelo, kwenzeka into efanayo kimi! I-4G ihamba kancane futhi? Njengoba izibuyekezo ezi-2 zokugcina zibuyela emuva, kungokokuqala ngiba nenkinga eminyakeni nge-iOS. Uzosukuma, Imisebenzi, ngolunye lwalezinsuku uzoshisa tooooddooo !!!
Uma ngikhuluma ocingweni ngine-headset ye-bluetooth ngizwa kodwa abangizwa, ngenzenjani?
Nginenkinga nge-iphone 5 yami, ngidlala umculo we-youte futhi ngiwulalela kahle, kepha uma ngifaka ama-headphone, umculo kuphela ophumayo kepha izwi liphuma kuphela umsindo, ama-voice notes abangithumelela wona ayizwakala ngamahedfoni… Kuphela lapho ngisebenzisa insiza-kuzwa, ayisebenzi… kufanele ngenzeni ??? Ungangisiza?
UManuel Alejandro Chacin Rodirguez kusho
kufanele uthenge amanye amahedfoni, abonakele.
URoberto Becerril kusho
Nginenkinga ngokukhanya kuhlala kumnyama futhi kuthatha isikhathi eside ukubuyisa ukukhanya yi-iPhone 6s
UJESU UDILE kusho
Ubusuku obuhle obuvela enyakatho-mpumalanga yenkundla yaseMexico
Nginenkinga ye-wifi nge-iPhone 6 yami ngemuva kokubuyekeza izolo kusihlwa, ngivele ngisuke ku-router kancane futhi amandla we-wifi alahlekile, izinzile ngokulingene kuphela uma ngingu-1 imitha kusuka ku-router. Ngiqhubeka nokuphenya hhayi lutho. asikho isisombululo esicacile okwamanje ngaphandle kokuthi ulinde isibuyekezo esisha noma noma ungabelana ngemibono ethile nami. Ngine-iphone 6 ene-iOS 10.0.2 (yakamuva).
Sengivele ngazama konke okuyisisekelo, ukubuyiselwa ngezilungiselelo, nge-itunes, nge-icloud futhi lutho !!! ….
noma yimiphi imibono ???????? '
Phendula kuJESU DIARTE
UJuliana Garmendia kusho
Sanibonani nonke! Ngine-iPhone 6 futhi isikrini esikhulu asisebenzi, okusho ukuthi, ngithola imiyalezo, izaziso nezingcingo, kepha ayingivumeli ngiphendule ngoba akukho okuvelayo, isithombe sami sangemuva esandisiwe kuphela, angikwazi ukusicisha noma ukusivula , ivele ingivumele ngilande ithebhu bese ngibona izaziso, lapho ukhetha eyodwa ingithumela ukuvula ifoni futhi lapho ayisangivumeli ukuthi ngivule ngomunwe noma ifake ikhibhodi kimi, ngabe kukhona owaziyo ukuthi kwenzekeni? noma yini engingayenza? Ngokusobala nami angikwazi ukuyicisha! Ngiyabonga!!
Sawubona Marcos, nginenkinga efanayo oyiphawulayo. Ukwazile ukukulungisa ngine-Mac kusukela ngasekupheleni kuka-2015.
Sawubona, sawubona, ngidinga ukwazi ukuthi kungani i-iPhone 6 Plus ingangivumeli ukuthi ngifake izicelo zami noma ngabe ngisithinta kangakanani isikrini, kuhlelo lokusebenza alungivumeli ukuthi ngicishe ngiphinde ngithinte futhi ukuze ngicishe njalo lapho ngithinta isikrini ukufaka iphasiwedi yami.shiya futhi kufanele ngikwenze ngonyawo lwami, othile angangisiza ngibonge
Sawubona. Ngimusha kulesi sithangami. Nginenkinga: i-ID yami Yomshayeli engenayo ikhutshaziwe. Zonke izingcingo zingena ngokungaziwa. Uma ufaka ukucushwa / ukungena kocingo lobunikazi, inkinobho "ifihliwe" futhi ayingivumeli ukuthi ngiyisebenzise noma ngiyenze ingasebenzi. Ngingakuxazulula kanjani lokho? Ngizoluthokozela usizo. U-Alicia
Ngine-ipone 6 plus ka-126 gb
Inkinga enginayo ukuthi isikrini sikhiyiwe, ungasuka kusikrini esisodwa uye kwesinye noma angikwazi ukuvula noma yiluphi uhlelo.
emva kwesikhashana iyasebenza futhi ngemuva kwesikhashana iphinde ibhajwe
Ngabe kukhona ongangitshela ukuthi unenkinga enjani
luisao acosta kusho
Sawubona, ngabe kukhona umuntu ongangisiza ngomakhalekhukhwini wami, ngishintshe isikrini futhi aliphasanga i-apula futhi lapho ngiphansi kwesoftware lenza iphutha, ngenzenjani?
Phendula ku-luisao acosta
I-iPhone 6 Plus yami ingalawulwa yodwa
Vula noma yiluphi uhlelo lokusebenza noma shaya izingcingo ngaphandle kokuthi ngikwazi ukulilawula
Kumele ngiyicime njalo umzuzwana ukugwema izingcingo, iqiniso selivele lingikhathele mina hee
Kepha kungibangela le nkinga kuphela uma ngiyiphatha ephaketheni lebhulukwe, hhayi kanjalo uma ngiyigqoka ngejakhethi yami, kodwa ukuba yiqembu elihle kuhle.
Kuzofanele ngiyithumele ukuyolungisa ku-appapple eLima yilokho i-Apple engitshele khona
Sawubona, okwenzeka kimi nge-Iphone 6 yami ukuthi kufanele nginamathiselwe kwimodemu, ukuze ngibe nesiginali ye-Wi-Fi, uma ngisuka kude nemodemu isignali ilahlekile, ngazama ukuyisetha kabusha noma kunjalo futhi funda ukuthi le modeli ifike nezinkinga ze-antenna, yini engingayenza?
Usaphila lo muntu obhale le post? Kufanele uzibulale noma ushintshe imisebenzi.
Ngemuva kokuvuselelwa kwe-iPhone 6 yami ne-wifi ne-bluetooth bekungasebenzi. Umuntu angisize ngicela.
Iqiniso ukuthi izibuyekezo zakamuva ze-IOS ziyanyanyisa, ngicabanga ngokushintshela ku-Android.
Nginokubambezeleka ekubhaleni futhi nebhethri lihle liphansi ngokuzumayo futhi uma ngisebenzisa ikhamera kuba sengathi ngomlingo iyacima futhi ayibuyi ngaphandle kokuthi ngiyixhume bese ngiyabona ukuthi isenayo ibhethri.
Lokhu kwenzeke nge-IOS 11 enkulu, Ngiyabonga ngempela, ukuthi ukubuyekezwa kwe-IOS kwangishiya ngithukuthele kakhulu, yeka ukuthi i-iPhone yayinhle kanjani emizuzwini embalwa nje ngaleso sibuyekezo
UKarla de Garcia kusho
Ikhamera eku-iPhone 6 Plus yami ayisebenzi. Angikwazi ukuthatha izithombe.
Filipe hassan kusho
okuhle kubo bonke abalandeli be-apula elikhulu lesono, iqiniso ukuthi imininingwane onginike yona ibilusizo olukhulu, i-iphone 6 yami ibivele ifakaza ukuthi ukungazinzi kokuxhumeka okungenantambo… Ngiyabonga !!!
Phendula ku-felipe hassan
Sinezinguquko ezingaphezu kwezingu-100 phakathi kwe-beta 2 ne-beta 3 ye-iOS 11
UTim Cook no-Eddy Cue bathamela ingqungquthela yaminyaka yonke yaseSun Valley